Iphrojekthi - iSiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
Amanye Amaphrojekthi Akamuva
Ikheli: BiJie city, YunNan
Indawo yase-Hill -110kV 2020.09
Ukwakhiwa okusha kolayini we-110kV kusuka eQuxian Xicheng kuya eLangya, Wire: JL / G1A-300 / 40-24 / 7 steel core aluminium stranded wire, ground wire: JLB20A-80, OPGW-24B1-80. Ingqikithi yobude bomugqa ingama-29KM, umbhoshongo wensimbi engela yizisekelo ezingama-90, isisindo seToatl singamathani angama-550. I-oda lisayinwe ngoSepthemba 2020 laze lafika ngo-Okthoba 2020, futhi umjikelezo wawuyizinsuku ezingama-35. Isetshenziswe ngokujwayelekile ekuqaleni kukaDisemba 2020.
Indawo esegqumeni - 220kV 2020.6
IHuarun Yuexi Sigan Baozu 84MW Wind Power Project 220kV iphrojekthi eyodwa yomugqa, iWire: JL / G1A-300 / 40-24 / 7, Ground wire: OPGW-24B1-80. Ingqikithi yobude bomugqa ingu-19.35KM, Ingqikithi yenani lombhoshongo wensimbi engela lingamasethi angama-45, Isisindo esiphelele singamathani angama-680. I-oda lisayinwe ngoMeyi 2020 lize lilethwe ngoJuni 2020, kanti isikhathi sokukhiqiza yizinsuku ezingama-25. Izosetshenziswa ngokujwayelekile ekuqaleni kukaNovemba 2020.
Indawo yasentabeni -35kV 2020.5
Okwakhiwa okusha okusuka esiteshini esingu-110kV Wumu Station kuya eLongyanjing 35kV eSuining, eSichuan, ucingo luthatha i-JL / G1A-300/25 futhi ucingo oluphansi lwamukela i-OPGW-24B1-50. Ingqikithi yobude bomugqa ngu-9.5KM, umbhoshongo wensimbi engeli kanye nepali yensimbi yensimbi yizisekelo ezingama-30, Isisindo esiphelele singamathani angama-260. I-oda lisayinwe ngo-Ephreli 2020 laze lalethwa ngoMeyi 2020, futhi umjikelezo wawuyizinsuku ezingama-25. Isetshenziswe ngokujwayelekile ngo-Agasti 2020.
Indawo ephakeme kakhulu eyi-110kV 2020.1
Iphrojekthi yomugqa wesifunda esisodwa eyakhiwe kabusha eWangda ~ Bitu 110kV, eZuogong city, eTibet, umqhubi we-JL / G1A-185 / 35-26 / 7 umugqa womhlaba we-GJ-70, ubude bomugqa bungu-126KM. umbhoshongo ungama-311 amasethi, Isisindo esiphelele singamathani ayi-3150. Kuthathe izinsuku ezingama-90 ngemuva kokuthi i-oda lisayinwe ngo-Okthoba 2019 kuze kuphothulwe ukulethwa kombhoshongo ngoJanuwari 2020, futhi wonke umugqa waqala ukusebenza ngo-Agasti 2020.
Indawo ejwayelekile –220kV 2019.12
Indawo ejwayelekile: iMongolia, ukwakhiwa okusha kwama-loops angama-110k ohlangothini lomsebenzisi we EMongolia iphrojekthi. Ucingo: JL / G1A-240 / 30.Ucingo olungezansi: OPGW-24B1-80. Ubude bomugqa bungu-11KM, Inani eliphelele: i-angle steel tower ingamasethi angama-35. Isisindo esiphelele: amathani angama-483. I-oda lisayinwe ngoSepthemba 2019, kanti isikhathi sokukhiqiza yizinsuku ezingama-22. Isetshenziswe ngokujwayelekile ekuqaleni kuka-Mashi 2020.